Paolo Maldini oo ka warbixiyay xaqiiqada ku aadan in AC Milan ay wadahadal la gashay Luka Modrić – Gool FM
Paolo Maldini oo ka warbixiyay xaqiiqada ku aadan in AC Milan ay wadahadal la gashay Luka Modrić
(Italy) 19 Luulyo 2019. Agaasimaha ciyaaraha kooxda AC Milan ee Paolo Maldini ayaa wuxuu shaaca ka qaaday xaqiiqada ku saabsan inay wada hadal la galeen xiddiga reer Croatia ee Luka Modrić, si ay ula saxiixdaan inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Luka Modrić ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo safka kooxda Real Madrid xagaagan, iyadoo ay wararku tilmaamayeen inuu ku biirayo Inter Milan sanadkii hore, balse ugu dambeyntii wuxuu sii watay naadigiisa Los Blancos.
Laakiin dhawaan ayey ahayd markii saxafiga caanka ah ee Gianluca Di Marzio uu sheegay in kooxda AC Milan ay ku fikireyso inay lasoo saxiixato xiddiga reer Croatia ee Luka Modrić.
Balse ugu dambeyntii Agaasimaha ciyaaraha kooxda AC Milan ee Paolo Maldini ayaa ka baxay aamusnaanta si uu u beeniyo wararka lala xiriirinayo Luka Modrić.
“Wax wada hadal ah lama furanin Luka Modrić hada kahor, waxaan raadineynaa ciyaartoy xoogan isla markaana ah dhalinyada, Modrić wuxuu noqon doonaa mid nagu haboon, laakiin lama xaajoonin isaga”.
“Waxaan u baahannahay xarumaha qaar, hadii aan raadineyno ciyaartoy tayo sarre leh waa qaali, waxaan kooxda ku heysanaa ciyaartoy xoogan, waxayna leeyihiin sifooyin kala duwan, sidaas daraadeed ma ahan inaanan ku deg-degno inaan ugu yaraan sameyno wax qalad ah”.
Nwankwo Kanu oo ka warbixiyay xulka ugu cad-cad ee caawa ku guuleysan kara koobka qaramada qaarada afrika ee 2019